Miisa 189 000 ny Kristianina ato anatin'ny synoda, 165 ny isan'ny fitandremana ary 112 ny isan'ny mpitandrina. Tsangambaton'ny faha-50 taonan'ny FJKM sy ny faha-200 taona nidiran'ireo Misiona LMS teto Madagasikara ny fananganana trano hafahan'ireo mpiofana Mpitandrina mianatra etsy amin'ny kolejy Teolojika etsy Ivato, efa mandeha tsara ny asa ary manentana hatrany ny kristianina aho handray anjara biriky amin'ny fanaovana izany asa lehibe izany, tsy hanery anareo kosa anefa aho fa ataovy am-pitiavana arak'izay tratranareo, hoy i Marc Ravalomanana. Nampanantena ny tenany fa tsy maintsy ho vita ary ny asa. Aza matahotra ianareo fa ho vita tsara sy tena mendrika ho an'ireo mpianatra Mpitandrina tsara izany, hoy hatrany izy. Marihina fa any Toamasina no hotanterahina ny ivon'ny jobily amin’ny volana aogositra 2018.
Fanasoavana ny Malagasy
Tsy olon’ny fiangonana ihany i Marc Ravalomanana fa olon’ny fandraharahana, ary mitsinjo ny Malagasy amin’ny alalan’ny fanomezana asa amin’ny alalan’ny orinasany, izay efa miroborobo indray ankehitriny. Mandeha anefa ny antsojay amin’ny resaka fanakatonana ny orinasa AAA, izay mampiasa Malagasy maro be ankehitriny. Tsy manaiky ny hikatonan’ny AAA ny tantsaha, ny mpiasa, ary nametraka sorabaventy ao amin’ny biraon’ny Ben’ny tanàna ao Andranomanelatra antsirabe. Efa mba miaina kely ny tantsaha dia izao mihorohoro fa hiverina indray ny hala-botry, ny tsy fananana asa, nefa maro izy ireo no nindrana vola tamin’ny CECAM, hoy izy ireo. Tena vahaolana ve ny fanakatonana ny orinasa AAA noho ny resaka lonilony ara-politika ? Mba efa nosainin’ny fanjakana ve ny fahaverezan’ny tombotsoan’ireo Malagasy ana hetsiny mivelona ao amin’ity orinasa ity ?